BaaristaQuraanka.BlogSpot.com - Quraanka yaa qoray?: Sababta ay diimaha been u yihiin iyo ujeedadooda
Posted by Maskaxda Xoree at 10:42 AM
Ciyaalka Xaafadda November 21, 2010 at 5:47 AM
Waxaad waddaa hawl aad iyo aad u qiimo badan oo waxaad tahay waddani Soomaaliyeed oo dadkiisa iyo dalkiisa wanaag u goobaya, sidaas daraaddeed, mahadsanid boqolkiiba boqol.
Dhammaan qodobbada aad soo bandhigtay waa run aan laga indho saaban karin. Waa caqli leh geesinnimo ee guul iyo guubaabo ayaan ku leeyahay, aniga iyo inta sida xorta ah u fekerta oo dhan.
irshaad cali October 17, 2012 at 10:47 AM
waar hoy gaalaysiinta maad ka daysid yar yarkan aan cilmiga lahayn, waxa ka dambeysa meel naar lagu waarayee, yaa ka shakisan inuu dhimanayo,xageed markaa ilahay ka gali?? is waydii sababta laguu abuuray??? ma ciyaar ciyaarbaa??
hadaad ilahay doonayso inad eegto horta cirka yo dhulka eeg. adeer nolol kooban oo 50 years ah ha ku dagmina dhalinyaroy. website kana haysku soo galina idinkoo bilaa cilmi ah, maxa yeelay websitken waxa leh yuhuud yo maraykan, raga ka masuulka ahna waa gaalo, tushuush bay ku furayaan dhalinyarada aan cilmiga lahayn. hoogte oo ba dee xagaydun ka gali, ilahay.
waar saaxiib marka hore aadban ku salaamay
waar niyow anigu fikirkaga oo dhan wan kugu raacsanahay lakiin hal midbaan fahmi waayay, diimaha oo dhan waad kasoo hor jeeda, hadana illah (eebe/rabi) inaad aaminsantahayba ka muuqata!
anigu waxaan aaminsanahay, qofku inuu maskaxdiisa adeegsado oo uu iyada ku kala garto xumaanta iyo wanaaga. hadii uu illah jirana: sida dadka gaajadu marka ay qabato cunto ugu baahdan. ayaa loogu baahan laha illahay.
runtii anigu markaan somalida eego waan la yaaba, maanta kama ogolaanayan hadaad ku tidhahdid, kaalay dhagaxan yarbaynu caabudaynaye, lakiin way ka ogolaanayan nin allah la yidhahdo oo aan la arki karin in la caabudo!
asad ahmed Ali January 13, 2016 at 12:16 AM
war ilaahay ka cabsada oo kadaaya xumaanta aad faafinaysaan. allaha wayn ee awoodiisu sarayso idinkagama baahna aqoonsi xataa iskadaa adigee aduunka waxa saaran ee insi iyo jini WAX aqoonsi ah ugama baahna. alaah awoodiisu waa wayntahay isagaa abuuray aduunkan, isagay kasoofulaan waxkasto oo aduunka kadhaca isagaana leh awooda kama dambaysta ah.
nimanka bloggan usamaystay inay dadka caqiidadooda haleeyaan ama dhaawacaan waxaan idiin sheegayaa inaaad kafiirsataan xumaataad faafinaysaan ilaahna waxba lama aha idiin idinka qabto umada shartiina lkn waa idiin seeta dheereenayaa maalintii uu idin qabtana waa maalin halaagiina uu yimid shaydaanka aad caabudaysaana uusan waxba idiinka dafcinayn maalintaas
Quraanka waa been cad oo maxamed soo aliftay oo dadka uu ku siray. diinta beenta ah ee islaam waa mid aad u xun.